Metal Stamping Service - Anebon Metal Zvigadzirwa Co., Ltd.
Anebon yakagadziriswa simbi stamping inosanganisira kurova, kukotama, kutambanudza, nekusimbisa uye kumwe kuita. Maitiro ega ega anoitwa uchishandisa CAD / CAM yakagadzirirwa maturusi ayo anogona kupa chaiyo inodiwa yezvikamu zvakaoma. Sheet simbi yekutsika inzira inokurumidza uye inoshanda kuburitsa yakasimba, yepamusoro zvikamu zveiyo Hardware, Aerospace, zvekurapa, zvemagetsi, maindasitiri, magetsi uye mamwe maindasitiri. Tichashandisa edu epamberi michina uye vane ruzivo timu kugadzirisa zvigadzirwa zvaunofungidzira, uye isu tinotenda kuti tinogona kuzadzisa zvaunoda zvese maererano nemutengo uye mhando.
Tinogona kupa zvinotevera sarudzo dzekugadzira:
Yakadzika yakadhonzwa zvikamu
Drilling, tapping uye reaming
Spot uye fungidziro Welding
Welding ye CO2 - manyore uye robhoti
Metal Stamping Maitiro
Kunyangwe ichigona kugadziriswa kugadzira zvimwe zvikamu, yedu simbi yekudonha inowanzo tevera iwo mamwe mashanu matanho:
Dhizaini ongororo:Mainjiniya edu anoongorora chikamu dhizaini kuona kuti yakakodzera simbi yekudhinda. Izvi zvinosanganisira kuongororwa kwakadzama kwechikamu chemadhigiramu, zvishandiso, kutambanudza zviyero uye kushivirira kunodikanwa.
Dzvanya Sarudzo: Mainjiniya edu anoona iwo akakodzera mushini saizi uye dhayamita yeiyo chikamu saizi uye zvinhu.
3D Virtual Prototype:shandisa chaiyo software kugadzira prototypes yezvikamu. Maitiro ekugadzira asati atanga, iyo prototype inomhanyisa kuburikidza nenhamba yakakura yekushandisa simulations kuti uwane chero matambudziko ekugadzira.
Zvekushandisa Setup: Mainjiniya edu ane hunyanzvi anotarisa saizi nezvinodiwa zvezvinhu uye kumisikidza zvishandiso.
Maitiro:Isa jira simbi kana simbi isina chinhu paforoma uye uigadzirise. Wobva washandisa muchina wekudhinda uye wotanga kushanda nechisimba simba. Dzokorora maitiro acho kusvikira icho chinhu chasvika pahukuru hunodiwa uye chimiro.
Dhizaini uye kugadzirwa kwekufambira mberi uye nemazvo maturusi chikamu chevimbiso yekuendesa mhinduro yakakwana yekugadzira kugadzirwa kwezvinhu zvakatsindirwa nesimbi.
Nhasi, isu tinoshandisa yedu-mumba hunyanzvi kupa inodhura-inoshanda yakakwira-chaiyo mold zvigadzirwa.
Tinogona kudzoreredza dhizaini chigadzirwa kana CAD mainjiniya kudhirowa kuburitsa muchina chishandiso chinogona kuburitsa chigadzirwa chako. Mould maturusi anogara kwazvo uye akavimbika, aine hupenyu hwakareba kutenderera, saka mutengo unogona kutorwa sekudyara.
Chombo cheforoma chichava chako, asi isu tinogona kuchengetedza, kugadzirisa uye kugadzirisa pazvinenge zvichidikanwa.
Sechishandiso chakakwana uye chitoro chekufa, isu tine hunyanzvi munzvimbo dzese dzekugadzira dzinosanganisira fiber laser, CNC kubaya, CNC kukotama, CNC inogadzira, kutenderera, CNC machining, Hardware kuisa uye gungano.
Tinogamuchira mbishi zvinhu mumashizha, mahwendefa, mabhawa kana machubhu uye vane ruzivo mukushanda nezvinhu zvakasiyana-siyana zvakaita sealuminium, mhangura, simbi isina chinhu uye simbi dzekabhoni Mamwe masevhisi anosanganisira kuiswa kwehardware, kuwina, kukuya, machining, kutendeuka uye kuungana. Sezvo mavhoriyamu ako achiwedzera isu zvakare tine mukana wekuomesa matomu zvikamu zvako kuti umhanye mune yedu dhipatimendi rekutsika simbi. Yekuongorora sarudzo inotangira pane yakapusa maficha anotarisa nzira yese kuburikidza neFIRIR & PPAP.